Nezve RIMWE NGUVA CHETE, unogona kusevha $ 39.99 uye uwane kopi YAKO YEMAHARA yebhuku raMike Geary raanotengesa zvakanyanya Fat Burning Kitchen! Iwe unongofanirwa kubhadhara mari diki yekutumira uye kubata.
* Chipo chinoshanda kana zvinhu zvichiripo. Hapana kana chinhu chinodzoserwa nechipo ichi, chero iwe uchingofanira kubhadhara iyo diki imwe nguva kutumira uye kubata mari. Iyi ndiyo nzira yaMike Geary yekusimudzira hupenyu hune hutano uye nzira yekutenda nekutenda nekugadzira bhuku rake mutengesi.